अस्पताल बाट औषधि उपचार गरेर फर्कदै थिए एम्बुलेन्स दुर्घटना भयर गयो ज्यान… – Sandesh Press
काठमाडौं । पाँचथरमा गए राति एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्या न ग एको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । झापाको बिर्तामोडबाट ताप्लेजुङ जाँदै गरेको प्रदेश नं १–०१–००१ च ७७०६ नम्बरको एम्बुलेन्स गए राति २ः४० बजे फिदिम नगरपालिका–३ सुम्निमाचोकमा सडकबाट करिब १५ मिटर तल झरेर दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा घाइते भएकी पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–२ फलैँचाकी ५० वर्षीय ममता राईलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल फिदिम ल्याइएकामा बिहान ३ः४० मा चिकित्सकले मृ त घोषित गरेका थिए । दुर्घटनामा सोही स्थानका हेमन सुब्बा र ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिका–३ का डोडकुमार राई घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
टाउको, हात तथा छा तीमा चो ट ला गे का घाइतेहरुको जिल्ला अस्पताल फिदिममा उपचार भइरहेको छ । मृ त क तथा घाइतेहरु उपचारका लागि झापा गई उपचारपश्चात घर फर्कँदै थिए । दुर्घटनापछि प्रहरीले उक्त एम्बुलेन्सका चालक पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–२ सिंहपुरका वीरेन्द्र धिताललाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । उक्त एम्बुलेन्समा चालकसहित चार जना सवार थिए । फाईल फोटो
Prevभर्खरै आयो खुशीको खबर ! जेठ २० पछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, यि क्षेत्र खुल्ने !
Nextम्यादी प्रहरीको लागि भर्ना खोलिँदै, तलब र अवधि समेत बढाइयाे